Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) - Hello Sayarwon
Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း )
Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) ကဘာလဲ။
မြင်လွှာ ဆိုတာ ဟာ အမြင်အာရုံ အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် မျက်လုံးရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ဝင်လာမယ့် အလင်းကို လက်ခံပေးတဲ့ အလွှာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်လွှာဆီသို့ သွေးအထောက်အပံ့မှုအတွက် အထူးသဖြင့် သွေးလွှတ်ကြော တစ်ခုနဲ့ သွေးပြန်ကြော တစ်ခုကနေ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီသွေးကြော နှစ်ခု ထဲက တစ်ခု (သို့) သွေးကြော နှစ်ခုကနေ ခွဲထွက်သွားတဲ့ သွေးကြော ငယ်လေးတွေ တစ်ခုခုမှာ ပိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ မြင်လွှာဆီကို သွားတဲ့ သွေးထောက်ပံ့မှုဟာ ပြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လို ပိတ်သွားတာကို occlusion လို့ခေါ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဓိကသွေးကြော တစ်ခု သာ ပိတ်သွားမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးဟာ ရုတ်တရက် အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ သွေးကြောငယ်လေးတစ်ခု ပိတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်လုံးအမြင်အာရုံ တစ်ပိုင်းတစ်စ ဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (သို့) တစ်ခါတစ်လေ ဘာရောဂါ လက္ခဏာမှ မပြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလို အခြေအနေမှာ နာကြင်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး။
Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင် အနည်းငယ်ပို ဖြစ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့အနည်းငယ်သော အခြေအနေတွေမှာ အသက် ၃၀အောက်ငယ်တဲ့ သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တာကို လည်းတွေ့ရပါတယ်။ ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်းဒီရောဂါကို ဖြစ်ဖို့ အားပေးနေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချ ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အချက်အလက်တွေအတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်း ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ရုတ်တရက်၊ နာကြင်မှုမရှိပဲ ကြာရှည် မျက်လုံးတစ်ဖက် အမြင် အာရုံလုံး၀ ဆုံးရှုံးသွားတာ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ၁၀ % မှာ amaurosis fugax လို့ခေါ်တဲ့ အမြင်အာရုံ ခဏတာ( ၁၀မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်လောက်) ချို့ယွင်းသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ တွေ ထပ်ခါတပ်ခါ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ amaurosis fugax ကို တစ်ခါတစ်လေမှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို ပိတ်ကားချလိုက်တာမျိုးဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
မြင်လွှာပျက်စီးတဲ့ ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ချို့သူတွေမှာ အမြင်အနည်းငယ်ဝါးတာမျိုးသာ ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့သူတွေမှာ ပိုပြီး ကြီးမားတဲ့ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးမှုမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်းကို အဓိက ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ သွေးကြော ကျဉ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြော ကျဉ်းတယ်ဆိုတာဟာ သွေးကြော နံရံ အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောလေးတွေဟာ သွေးတွေ ချောချောမွေ့မွေ့ စီးဆင်းနေတဲ့ ပြွန်နဲ့တူပါတယ်။ သွေးကြောကျဉ်းတယ်ဆိုတာဟာ အဲဒီပြွန်လေးတွေထဲမှာ ပြသနာဖြစ်တာမျိုးပါ။ ပုံမှန်မှာ အဲဒီပြွန်လေးဟာ သွေးတွေ အဲဒီထဲကဖြတ်ပြီး ကောင်းကောင်းစီးဆင်းနိုင်ဖို့အတွက် ကျယ်ပြီး ချောမွေ့မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အချို့သော သူတွေမှာ ပြွန်ရဲ့ အတွင်းဘက်ဟာ ကျဉ်းသွားပြီး ချောမွေ့မှုမရှိတော့ဘဲ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သွေးတွေက အဲဒီပြွန်တွေထဲက ဖြတ်ပြီး စီးဆင်းဖို့ ခက်ခဲသွားစေပါတယ်။ အဲလို သွေးကြော အတွင်းမှာ စေးကပ်နေတဲ့ အဖတ်တွေကို atherosclerotic plaques (သို့) တစ်ခါတစ်လေ သွေးကြောလေးတွေမာသွားခြင်း၊ပါးသွားခြင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့သွေးကြောထဲမှာ အဲလို စေးကပ်တဲ့ အဖတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေက သင့်သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ အမှိုက်တွေကို ဖမ်းယူထားနိုင်တဲ့အတွက် အဲဒီ အဖတ်တွေကို ပိုပြီးကြီးလာစေနိုင်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဲဒီ အဖတ်တွေက သွေးတွေကိုမြင်လွှာမှ (သို့) မြင်လွှာသို့ မစီးသွားနိုင်လောက်အောင်တားနိုင်တဲ့အထိ ကြီးလာနိုင်ပါတယ်။ အမှိုက်တွေအများကြီးစုမိ လာတဲ့အခါ သွေးကြောတွေကို လုံး၀ ပိတ်ဆို့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုနည်းလမ်းနဲ့ သင့်မြင်လွှာကို သွားမယ့်သွေးကြောတွေ ထိခိုက်သွားပြီး ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်မယ့် သွေးကြောပါးလာခြင်းအတွက် အားပေးနေတဲ့ အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အသက်အရွယ်။ ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်း အများစုဟာ အသက် ၆၅ နှစ်အထက်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုလက်စတီရော ပမာဏ များခြင်း။
အ၀ လွန်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သက်အရွယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ ပြောင်းလဲ ယူလို့မရပေမယ့် အခြား အချက်အလက်တွေကို တော့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း နဲ့ ကိုလက်စတီရော ပမာဏများခြင်း စတဲ့ သွေးကြောတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခြေအနေ တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဆေးညွှန်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဆီးချိုရှိတယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ဆီးချို ထိန်းချုပ်ခြင်းက သင့်ကို သွေးကြောပြသနာတွေ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာတွေ စားခြင်းနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာကို ရပ်လိုက်ခြင်းကလည်း ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို လျော့နည်းအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့် ကိုယ်အလေးချိန် ကို ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရအောင် ဘယ်လို ထိန်းရမလဲဆိုတာနဲ့၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အတွက် ဆရာဝန်ဆီမှ အကြံဉာဏ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ရဲ့ရောဂါ လက္ခဏာတွေကို ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာ သင့်ဆရာဝန်က ရောဂါ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်တက်ဖူးတာမျိုး၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချို၊ ရေတိမ်၊ မျက်လုံး ထိခိုက်မှု (သို့) amaurosis fugax (အမြင်အာရုံ ခဏတာ( ၁၀မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်လောက်) ချို့ယွင်းသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ) တွေ ဖြစ်ဖူးရင် အဲဒီ အကြောင်း မေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဆရာဝန်က သင်ဘယ်လောက်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ စစ်ဆေးချက်တွေနဲ့ မျက်လုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က မျက်ဆံကျယ်လာအောင် မျက်စဉ်းခပ်ဆေးရည် တစ်မျိုးသုံးပြီး မြင်လွှာ မျက်လုံးအတွင်းဘက်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီစစ်ဆေးချက်လုပ်ဆောင်နေစဉ် အတွင်းမှာ ဆရာဝန်က opthalmoscope လို့ခေါ်တဲ့ ကိရိယာတစ်ခုကို သုံးပြီး သင့်ရဲ့ မြင်လွှာကို သွားတဲ့ သွေးကြောလေးတွေကို ပုံမှန်ဟုတ်၊ မဟုတ်(သို့) ဖြူနေတဲ့နေရာတွေရှိ၊ မရှိ( ဖြူနေခြင်းဟာ သွေးလွှတ်ကြောတွေ ပိတ်တာကို ဖော်ပြတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်)၊ သွေးယိုနေခြင်းရှိ၊မရှိ၊ သွေးကြောတွေထဲမှာ အလုံးတွေ၊သွေးခဲတွေ ရှိနေ၊မနေ၊ (သို့) အခြား ပြသနာတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော အခြေအနေတွေမှာ ဆရာဝန်က ဆိုးဆေးတစ်မျိုးကို ထိုးထည့်ပြီး မျက်လုံးအတွင်းသွေးစီးမှုအခြေအနေကိုသိနိုင်ဖို့ fluorescein angiography လို့ခေါ်တဲ့ စစ်ဆေးချက်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့သောသူတွေမှာ (အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးသူတွေမှာ) ပင်မ မြင်လွှာသို့သွားတဲ့ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်း တွေဟာ သွေးခဲတွေ ပိတ်တာ၊ ပြုတ်ထွက်တာကြောင့် ထက်စာရင် သွေးကြောတွေ ခဏတာ ရောင်ယမ်းတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေ အနေနဲ့ ရောဂါ အမည်တပ်နိုင်ဖို့အတွက် erythrocyte sedimentation rate နဲ့ C reactive protein စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သော အခြား သွေးစစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအပြင် ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ ပင်မမျက်လုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်းဟာ ရောဂါအမည်မတပ်နိုင်သေးတဲ့ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ တစ်ခုခုမှ ပြုတ်ထွက်လာတဲ့ သွေးခဲတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သံသယရှိပါက သင့်နှလုံးနဲ့ နှလုံးသွေးကြောတွေရဲ့ သွေးစီးမှုကိုပါ သိနိုင်အောင် စစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် အထူးသဖြင့် အသက်ငယ်တဲ့သူတွေမှာ ကိုလက်စတီရော ပမာဏ နဲ့ သွေးခဲတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပုံမမှန်မှုတွေ ကို စစ်ဆေးဖို့ အတွက် သွေးစစ်ဆေးချက်တွေ လည်း လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
Central Retinal Artery Occlusion (ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်းဟာ အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုအနေနဲ့ မြင်လွှာဆီကို သွေးတွေ မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ရောက်အောင် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရလဒ်တွေ အားလုံးက စိတ်ပျက်စရာအ ခြေအနေတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဘယ်ကုသမှုကမှ အကောင်းဆုံးလို့ မသတ်မှတ်နိုင်သေးပါဘူး။
သွေးခဲတွေဖျော်နိုင်တဲ့ဆေးတွေ ထိုးခြင်း။ ဆရာဝန်က သွေးခဲတွေ ဖျော်ပေးနိုင်တဲ့ thrombolytic လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးတစ်မျိုးကို သွေးကြောပိတ်နေတဲ့ နေရာ အနီးနားမှာ သွေးကြောထဲ တိုက်ရိုက်ထိုးတည့် နိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံးကို အပ်ဖြင့် ဖောက်ပြီး အရည်ထုတ်ယူခြင်း။ မျက်လုံးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ သင့်မျက်လုံးအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အရည်အနည်းငယ်ကို ဖယ်ရှားဖို့ အတွက် အပ်တစ်ချောင်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲလို လုပ်ခြင်းက မျက်လုံးအတွင်းမှ ဖိအားတွေ ကျစေနိုင်တဲ့ အတွက် မျက်လုံး သွေးကြောကို ဖြတ်ပြီးသွေးစီးရလွယ်ကူအောင် လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံးကိုနှိပ်နယ်ပေးခြင်း။ ဆရာဝန်က လက်ချောင်းကလေးများဖြင့် သင့်မျက်ခွံပေါ်မှ တစ်ဆင့် သင့်မျက်လုံးကို ဖိအားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် သွေးခဲတွေကို ကြေစေနိုင်ပါတယ်။
သွေးကြောတွေကို ကျယ်စေတဲ့ ဆေးများ။ nitroglycerin ၊ isosorbite နှင့် pentoxifylline စတဲ့ဆေးတွေက သွေးစီးမှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
လေအရောရှုခြင်း။ အောက်ဆီဂျင် ၉၅% နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ၅% ပါတဲ့လေကို ရှုခြင်းဖြင့် သင့်မျက်လုံးသို့သွားတဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ သွေးပမာဏကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓါတ်ငွေ့ကို ပြန်ရှုသွင်းခြင်း။ တကယ်လို့ carbogen မရနိုင်ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်ကသင့်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏ ကိုများလာစေဖို့အတွက် သင့်ကို စက္ကူအိတ်တစ်ခုထဲကို ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ဖို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏ များလာခြင်းက မြင်လွှာဆီသွားတဲ့ သွေးကြောတွေကို ကျယ်စေနိုင်ပြီး သွေးစီးမှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဦးနှောက်သွေးကြော ရောင်ယမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပင်မမျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်တွေကို စတီးရွိုက် ပမာဏများများ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ စတီးရွိုက်ဆေးကို အဲဒီပမာဏက စပြီး ဆေးပမာဏကို လပိုင်းလောက်အချိန်ယူပြီး တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချသွားရပါမယ်။
ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်တဲ့ အခြေအနေတွေ တော်တော်များများ ဟာ သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း၊ သွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ (သို့) ဆီးချို နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အတွက် ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းထားခြင်း၊ သွေးကြောထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုလက်စတီရောပမာဏ၊ သွေးထဲက သကြားဓါတ် ပမာဏတွေကို ထိန်းထားခြင်းဖြင့် ဒီလို မျက်လုံးပြသနာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီးချိုရှိတဲ့ သူတွေဟာဆိုရင် မျက်ဆံ ကျယ်အောင်လုပ်ပြီး စစ်ဆေးတဲ့ မျက်လုံးစစ်ဆေးခြင်းကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပင်မ မျက်လုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် အလုပ်အတွင်း (သို့) အားကစားလုပ်ချိန်တွေမှာ မျက်လုံးကို ကာကွယ်ထားတဲ့ မျက်မှန်၊ မျက်နှာ အကာ၊ စတာတွေ အမြဲဝတ်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ ကားစီးတဲ့ အခါမှာလည်း ကားတိုက်မိတာတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ မျက်နှာ နဲ့ မျက်လုံးတွေကို ကားရဲ့ dashboard နဲ့ မရိုက်မိစေရန်အတွက် ထိုင်ခုံခါးပတ်တွေ ပတ်ထားဖို့ သတိထားပါ။
Central retinal artery occlusion.http://www.rnib.org.uk/eye-health-eye-conditions-z-eye-conditions/retinal-vessel-occlusion.Accessed November 24, 2016.
Central retinal artery occlusion.https://en.wikipedia.org/wiki/Central_retinal_artery_occlusion.Accessed November 24, 2016.
Central retinal artery occlusion.http://eyewiki.aao.org/Retinal_Artery_Occlusion. Accessed November 24, 2016.